Lionel Messi VS Cristiano Ronaldo 2-0 – Gool FM
(Europe) 30 Dis 2018. Lionel Messi ayaa sanadka 2018 ku dhammeystay isagoo 2-gool dheer xiddiga ay sida wayn u xifaaltamaan ee Cristiano Ronaldo.
Laacibka reer Portugal ayaa labo gool dhaliyay ciyaartii ay Shalay Juventus 2-1 uga adkaatay Sampdoria, taa oo ka dhigan in Lionel Messi uu sanadka 2018 ku dhammeystay isagoo ah laacibka ugu goolasha badan sanadkaa oo wuxuu dhaliyay 51-gool halka uu Ronaldo dhaliyay 49-gool.
Messi ayaa dhalinayay 50-gool iyo ka badan sideed ka mid ah sagaalkii sano ee la soo dhaafay, sanadka kaliya uu 50-gool ka hoos maray waxay ahayd 2013-dii kolkaa uu 45-gool dhaliyay 47-kulan uu ciyaaray.
Cristiano Ronaldo ayaa isagu markasta dhalinayay goolal ka badan 50 tan iyo 2011-dii oo sanadkii uu dansanaa Messi 2013, wuxuu Ronaldo dhaliyay 69-gool.
Laakiin sanadkan ayay ku bariiqatay laacibkii hore ee Real Madrid oo waa markii ugu horreysay uu 50-gool gaari waayo muddo todobo sano kaddib oo waxaa uga harsanaa hal gool oo qura.
Yeelkeede waxaa weli socda Dagaalka Messi iyo Ronaldo ee ku aadan Golden Boot (Kobta Dahabka ee Gool dhalinta Yurub)
Weeraryahanka Juventus ayaa iminka Serie A ka dhaliyay 14-gool halka uu Lionel Messi isna uu 15-gool ka dhaliyay horyaalka La Liga ee dalka Spain, haddaba waa la arki doonaa qofka ku guuleystay Kobta Dahabka marka uu xilli ciyaareedku dhammaado.